मोटोपन नियन्त्रणका लागि कस्तो खाना खाने ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com मोटोपन नियन्त्रणका लागि कस्तो खाना खाने ? - खबर प्रवाह
उमेर समुह, लिङ्ग, शरीरको आकार र फिट्नेस जस्ता कुराले शरीरलाई कति मात्राको क्यालोरी आवश्यक पर्दछ भन्ने निर्धारण गर्दछ । बन्दाबन्दीका बेला आवश्यकभन्दा बढी खानेबानी बढ्दो हुँदा हाम्रो उर्जाशक्ति सकारात्मक दिशातर्फ बढ्दै गएको छ । उर्जा सकारात्मक भएमा मोटोपन निम्तिन सक्दछ र यसले विभिन्न प्राणघातक रोग जस्तै रक्तचाप, मधुमेह तथा मुटुरोगको जोखिम बढाउँदछ ।
– दैनिक थालीमा सन्तुलित आहार खाने बानी बसाल्नुपर्छ । कार्बोहाइड्रेट पाइने अन्न तथा कन्दमूल जस्तै: मकै, गहँु, फापर, आलु, चामल सामान्य मानिसले ५५देखि ६० प्रतिशत आफ्नो दैनिक भोजनमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
– मैदाजन्य खानेकुरा पास्ता, चाउचाउ, बिस्कुट, म:म, चाउमिन, थुक्पाको प्रयोग कम गर्ने र गुलियो कुकिज, डुनट र उच्च क्यालोरी हुने केकको प्रयोग कम गर्नु पर्छ ।
– रोटी, गेडागुडी, दही, दूध, सागसब्जीलाई प्रशस्त दैनिक थालीमा समावेश गर्नाले क्यालोरी नियन्त्रणमा मद्दत पुग्छ ।